အားလုံးကိုအ ဆင် ပြေစေချင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အားလုံးကိုအ ဆင် ပြေစေချင်
အားလုံးကိုအ ဆင် ပြေစေချင်
Posted by bigchef on Dec 11, 2010 in News | 8 comments
ဒီနေရာမှာ အားလုံးကို ဆိုတာက နိူင် ငံခြားမှာရောက် နေတဲ့မြန်မာတွေ၊ နိူင် ငံခြားကို ခုမှစသွားမဲ့ ကိုကို မမ ညီလေး ညီမလေးတွေ အတွက် ရည်ရွယ်တာပါ။ ကျွန်တော် တို့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ အများစု ဟာ အိမ်မှုကိစ္စ နိုင်နင်းပြီးချက်တတ်ပြုတ်ကြပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေတော်တော်များများကတော့ လက်ဆေးစား ပြီးပစ်သွား ကများပါတယ်။တစ်ချို့ မိန်းကလေးတွေလည်း ရှိ မှာပါ။ အဲဒီလိုလူတွေများနိူင်ငံခြားရောက်ရင် စိတ်ညစ်စရာတွေများများတွေ.ရဖို. များပါတယ်။ ဖြစ်သလိုနေဖြစ်သလိုစား ဆိုသူတွေတောင် ကြာ ကြာမ ခံ နိုင် ပါဘူး။ဘယ်သူက ခေါက်ဆွဲခြောက်၊ဟမ်ဘာဂါနေ့တိုင်းစား နိူင်မှာလဲ။ Asia မှာရှိတဲ့ Singapore တို့Malaysiaတို့ ဆိုရင် သူတို့ အစားအစာ တွေကိုယ်နဲ့နည်းနည်းနီးစပ်လို့တော်သေးတယ်။Middle east နဲ Eroupe သွားလို့က တော့ သေပြီ ဆရာပဲ။ဆိုင်မှာ စားရင် ဈေးကကြီး။ချက်က မချက် တတ် နဲ.ဒုက္ခ လှလှ ကြီးတွေ့ပြီ သာ မှတ်။ဝယ်စားပြန်တော့ လည်းခံ တွင်းက မတွေ့ နဲ . တော်တော်ဒုက္ခလှလှ ရောက် ပါံ တယ်။အဲဒီ အ ချိန် မှာသာ ကိုယ့် ဘာသာကိုယ် ချက် တတ် ၇င်Supermarket တွေ မှာဈေး ဝယ် ကပြီးတော့ဖွယ်ဖွယ် ရာရာချက် စား လို့ရ တာ ပေါ့ ။တစ်ချို့နိုင်ငံ မှာအ ပြင် မှာတစ်ခါစားတဲ့ကုန်ကျ စားရိတ် က အိမ်မှချက် စား ရင် တစ်ပတ် လောက်စားလို့ ရ ပါ တယ်။အချိန်တော့နည်းနည်းပေးရတာပေါ့ ။ဒါပေ မဲ့ ပိုက်ဆံ စုချင်သူုတွေ၊ချွေတာချင်သူအတွက်တော့အ ဆင်ပြေတာပေါ့ ။ နောက်တစ်ခုက စကားမစပ် သန့်ရှင်းရေး ကိစ္စပါ။နိုင်ငံခြားရောက်ရင် ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းအခန်း တစ်ခန်းငှားနေနိုင်တဲ့သူ ကBOSS ပါ။Room-mate နဲ.ငှားနေရလို့က တော့ ကိုယ့် Room_mateက သန်သန်ရှင်းရှင်းနေ တတ်တဲ့သူ ဆိုရင် ကိုယ်ကလည်းသန့် သန့် ၇ှင်းရှင်း နေတတ်မှ အ ဆင် ပြေမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ မှာနေတုန်းက တံ့မြက် စည်းတောင် မလှည်းဖူးတဲ့ သူကတာ့ အ ခက်တွေ့ စ၇ာ။ကိုယ်ထူကိုယ်ထ သန့် ရှင်းရေးလုပ်နေရပြီလေ။ 2005 တုန်းက မလေး၇ှား မှာနေတော့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီအလည်သွားဖူး ပါ တယ်။အဲဒီသူငယ်ချင်းက ပ ညာ၇ှင် တစ်ယောက် အ နေ နဲ.Company တစ်ခု မှာအလုပ်လုပ် နေတာပါ။ သူတို့Condo ခန်းတစ် ခု မှာ သူငယ်ချင်း သုံးယောက် စုနေကြတာပါ။ကျွန် တော့ သူငယ်ချင်းကတော.မြန်မာ ပြည်မှာအိမ်ဖော်တွေ ဘာတွေနဲ့နေနိုင်တဲ့လူတန်းစား ထဲက ပါ။ကျန်တဲ့သူတွေ က လည်း သူ့လိုလူတွေ ထင် ပါတယ်။အဲ ဒါနဲ့ေ၇ာက် သွားတော့ တစ် ခန်လုံး ရှူပ်ပွနေတာနေ တာ ပဲ။Kitchen ကလည်း ညစ် ပတ် ။ ဒါနဲ့မေး မိ ပါ တယ် ။သန့်၇ှင်း ရေး မ လုပ် ကြ ဘူး လားပေါ့၊ ဖြေ ပါ တယ် ၊ မ အား လို့ပါ တဲ့။အ မှန်တော့သန့် ရှင်းရေးလုပ် ချိန်တော့ ၇ှိမှာပါ။အိမ် မှာနေတုန်းက လုပ်လေ့ လုပ် ထ မ ရှိ ဘယ်က စ လုပ် ရ မှန်း လည်းမ သိ တော့မ လုပ် ဖြစ် ကြ တာ ပါ။ အိမ် ရှင် နဲ့များ တွဲ နေ ၇ ရင် စိတ် ပျက် စ ရာ ကြီးပေါ့ ။အိမ် ရှင် က ငြို ငြင် မှာ သေ ချာတယ်။ နိုင်ငံ ခြား မှာ တ ကယ့်သူဌေး မှ အိမ် ဖော်နဲ့ဘာ နဲ့နေ နိုင် တာ ပါ။ဒါကြောင့် ကိုကို မမ ညီလေး ညီမ လေး တို့နိုင် ငံ ခြား သွား ဖြစ် သည် ဖြစ် စေ မ သွား ဖြစ် သည် ဖြစ် စေ အိမ် မှုကိစ္စ ၊ အ ချက် အ ပြုတ် တွေ ကို တတ် နိုင် သ မျှ လေ့လာ ထား သင့်သည်။ထွေထွေထူထူး မ ဟုတ် ပါ ဘူး။အိမ် မှာ အ မေ ဟင်း ချက် တုန်း လေးကူ ချက် လိုက် သန့်ရှင်းေ၇း လေးဝင် လုပ် ကူပေး လိုက် ဆို ရင် အ မေ တောင် ဝမ်း သာ အုန်း မယ်။ ယော က်ျား လေး တွေ လည်း မီး ဖို ချောင် ဝင် ၇ လို့ဂုဏ် မ ငယ် ပါ နဲ.။ က မ္ဘာ ကျော် စား ဖို မှူး တွေ အား လုံး က ယော က်ျား တွေ ပါ. အိမ်မှူ ကိ စ္စ တွေ ချက် ပြုတ် တာ တွေ လုပ် ထား ဖူးတော့န ဖူး တွေ့ဒူးတွေ့ကြုံ ရ တဲ့အ ခါ စိတ် မ ညစ်ရ တော့ဘူး ပေါ့။ ကဲ ဘယ် လို လဲ။
သဘူတောပါတယ် … ။မြန်မာယောက်ျားလေးတော်တော်များများက အိမ်မှာ ဦးစားပေးခံရတယ်၊ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး။အဓိက အမေတွေက အရမ်း ပစားပေးတယ် ..။အိမ်အလုပ်ဝိုင်းကူရင် မိန်းမဆန်တယ်လို့အပြောခံရတယ်။
သိသလောက် မြန်မာယောက်ျားလေးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်က အဲ့လိုတွေချည်းပဲ။
မောင်လေးတစ်ယောက်လဲ အဲ့လိုပါပဲ၊အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ မိဘကလည်း ပိုက်ဆံတက်နိုင်တော့ နိုင်ငံခြားသွားပါတယ် အိမ်မှာလက်ဆေးအသင့်စားပြီး နေလာတာနိုင်ငံခြားလဲသွားရော ဘာမှမလုပ်တက်တော့ တော်တော် ဒုက္ခ ရောက်ပါတယ်။ဒီကြားထဲ သန့်ရှင်းရေးလဲမနိုင်တော့ပိုဆိုးပါတယ်။ ရောက်ခါစက အခန်းဖော်နဲ့အတူတွဲပြီးချက်စားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သူက သူ့အလှည့်မှာ အသုံးမကျတာတွေများလာတော့ အခန်းဖော်နဲ့ပါ အဆင်မပြေဖြစ်လာပါတယ်။ဖုန်းဆက်တိုင်း ငိုပါတယ်။နောက်ပိုင်း အိမ်ကို ပြန်ခေါ်လိုက်ရ ပါတယ် ။တခြားကိစ္စတွေမှာလည်းတစ်ယောက်ထဲ ရပ်တည်နိုင်စွမ်း သိပ်မရှိတော့လို့ပါ။
သီးသန့်တခန်းစီနေတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ၊ တတ်နိုင်ရင်တော့ တယောက်အိပ်ခန်း apartment ဖြစ်ဖြစ် စတူဒီယို apartment တခုလုံး ကိုယ်တယောက်ထဲပေါ့နော်။ အခန်းဖော်နဲ့ နေတာတော့ ရေတိုပဲ ကောင်းပါတယ်။ သူငယ်ချင်းရင်းချာတွေ ငွေချေးလို့စကားမများ အခန်းစပ်တူငှားနေမှ မုန်းသွားကြတာ အများကြီးပါ။
ယုတို့မလေးကိုသွားတုန်းကတော့ ယောကျာ်းလေးတော်တော်များများက ဟင်းချက်တော်ကြတယ်၊ ကိုယ်တွေက အခုမှ စရောက်ခါစဆိုတော့ ရောက်နေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ယောကျာ်းလေးအစ်ကိုတွေက ထမင်းဖိတ်ကျွေးကြတယ်၊ သူတို့ဘာသာချက်စားကြတယ်၊ ဟင်းချက်လဲ တော်ကြတယ်၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေလို ပိတ်ရက်မျိုးမှာဆိုရင်တော့ မိန်းကလေးတွေက ဟင်းဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ချက်ပြီးအပြန်အလှန်ပေးကြတာပေါ့ အလှူလုပ်လို့ မုန့်ဟင်းခါးဆိုရင် ဘယ်မြန်မာအိမ်မှာမဆို လိုက်စားတာပဲ၊ မုန့်ဟင်းခါးသိပ်စားချင်လို့လေ၊ အခန်းဖော်နဲ့အတူတူနေရတဲ့ ဒုက္ခကတော့ တော်တော်ကြီးတယ်၊ မလွယ်ဘူး၊ တခြားနိုင်ငံမှာ အလုပ်သွားလုပ်ကြတဲ့သူ တော်တော်များများကတော့ သည်းခံနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ အတွေ့အကြုံတော့ ကောင်းကောင်းရသွားတာချည်းပဲ
ညစ်ပတ်တဲ့လူတွေနဲ.အတူနေရတာလောက် အာဖျံကွီး စိတ်ညစ်တာမရှိဘူး။
ကိုယ်က ပိုက်ဆံတွေလဲချေးပေးတရ်။ အကူအညီတောင်းရင်ပေးတတ်တရ်။ ကျွေးမွေးထားရလဲ ပြသနာမရှိဘူး။ ညစ်ပတ်လို.ကတော့ လာမနေနဲ.။ တအားရွံတရ်။ ကန်ထည့်လိုက်မရ် … အဝေးဆုံး …………..
ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာရိုးရာစားသောက်စရာ တင်ပေးတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အနီးစပ်ဆုံးတော့ မြန်မာစားသောက်ဖွယ်ရာ အရသာတော့ထွက်လာတယ် ချက်နည်းအတိုင်းလိုက်ချက်တာ။ ၆နှစ်လောက်ငတ်နေတဲ့ အရသာတွေ ပြန်စားရလို့ ချက်နည်းတွေများများထပ်တင်ပေးပါ။ စောင့်မျှော်အားပေးနေပါသည်။
( မွေးရပ်မြေ၏ အဝေး၌ နေထိုင်ခြင်း/ မိမိသည်သာ အဖေ မိမိသည်သာ အမေ မိမိသည်သာ ခေါင်းဆောင် ) ဆိုပြီး ဒီပို့ စ်မျိုးတစ်ခု ကို ရေးဘို့ကျွန်တော် ပုံစံချထားပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ တွေ တစ်နယ်တစ်ကျေးကို ရောက်ရင် နေထိုင်ရမယ့် အကျင့်စရိုက်တွေအကြောင်းကို လက်တွေ့ ကျကျ ပြောပြခြင်လို့ ပါ
စိတ်ကူးနဲ့ လက်တွေ့ အကြောင်းတွေ စသည်စသည် ပေါ့ဗျာ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီပို့ စ်ကလေးက လေ့လာတတ်သူတစ်ယောက်တွက် တန်ဘိုးရှိမှာပါ
အများအားဖြင့်တော့ မိုးလားကဲလား ပြောနေကြတာဘဲများပါတယ်
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တစ်ဦးခြင်း လုပ်ရမယ့် ကျင့်ကြံရမယ့် အကြောင်းလေးကို ရေးပြပေးတဲ့အတွက် လွန်စွာ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
ဒီလိုပိုစ်တွေ များများတင်ပေးသင့်သလို အမိနိုင်ငံခြားမှာ မြန်မာအချင်းချင်း ကူညီရိုင်းပင်းမှုရှိမရှိ လူတွေ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဆက်သွယ်ရေး အနေအထား အခက်အခဲလေးတွေလည်း တင်ပေးမယ်ဆိုရင် အဝေးသွားအလုပ်လုပ်မယ့်သူများအတွက် ပိုပြီး အဆင်ပြေမယ်လို့ မနော မြင်မိပါတယ်ရှင်။
ကဲ.. သားသမီးပြည်သူတွေကပဲ..မြန်မြန်လေး… ပေးစားလိုက်ကြရအောင်..။
ကျုပ်လည်း နိုင်ငံခြားအတွေ့အကြုံရှိသလောက်..တတ်သလောက်မှတ်သလောက်… တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖြေရှင်းပါမယ်..။